A.K.N CONSTRUCTION GROUP: August 2010
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 6:18 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 6:16 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:55 AM No comments:
ထာဝရ – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
သူ့ မှသူ့  ဆိုတဲ့ “အချစ်”၊
အပြောင်းအလဲ – မောင်စိန်ဝင်း ( ပုတီးကုန်း )
ဘဝဆိုတာ ဒါပဲ ခင်။
မောင်စိန်ဝင်း ( ပုတီးကုန်း )
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:52 AM No comments:
အချစ်ဦး – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:48 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:46 AM No comments:
ညို – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
ဟိုး …. တောင်ထိပ်မှာ
မျက်ဝန်းထဲမှာ မိုးရွာပြီ ညို …. ။
ပြိုမည်အုံးအုံး၊ မိုးထစ်ခြုံးပြီ ….
အလွမ်းမိုးရိပ်တွေပါ ညို။ ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:41 AM No comments:
လှေပေါ်မှာ – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
ခင်ရယ် ကိုယ်ရယ် ဘယ်လိုဖြတ်၊
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:39 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:38 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:23 AM No comments:
တစ်ခါတုန်းက နေရာဟောင်း – မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) Share 1
ဂီတာ တယော၊ လွမ်းမောနွဲ့လျ၊
နှုတ်ဆက်ပြန်လာ၊ ရတနာ အင်းလျား၊
တစ်ခါရောက်တယ် သူငယ်ချင်း …။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:22 AM No comments:
ငယ်စာရင်းက … အတန်းဖေါ်။
“ဘဝပျိုးခင်း” ဆိုတဲ့ သည်ကျောင်းတော်။
သည်ကျောင်းမှာ ဘဝကို ထုဆစ်၊
“အကောင်း” … “အဆိုး” … “ဓမ္မ” .. “အဓမ္မ” .. ဝေခွဲ၊
အနေရဲစို့ … မှန်းရည်မျှော်၊
(ကြီးတော့) … တို့တတွေကွဲ။
တပည့်တွေလဲ (လည်း) ဆံပင်ဖြူ၊
ဖြတ်မရအောင် … အခုဘဝ .. အနုသယ … ဝဲမှာ၊
(သူငယ်ချင်းရယ် …) သမုဒယနဲ့စွဲ။ ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:18 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:33 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:27 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:16 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:09 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:57 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:42 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:37 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:30 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:23 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:19 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:16 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:02 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 8:28 AM No comments:
တစ်နေရာစီ – မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:53 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:49 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:35 AM No comments: